Ny Draage-kafe amin'ny IDRA-21, ny aina antsasa-pahasoavana, ny tombony, ny fiatraikany ary ny famerenana
Inona ny vovoka IDRA-21?
Olombelona tanteraka ny mitady hatrany zavatra afaka manome anao sisiny. Mba hanatsarana ny zava-bitan'ny tena, ny ankamaroany dia lasa mivadika fanafody mahery, fantatra amin'ny anarana hoe nootropics. Mety nahita fanafody fanampiny ianao izay milaza fa mampiroborobo ny fahaizanao misaina saingy nijanona nanontany ny tenanao hoe iza no mety? IDRA-21 dia zava-mahadomelina izay nalaina avy amin'ny rafitra simika benzothiadiazine. Misy ny filazana fa ny IDRA-21 dia misy ifandraisany amin'ny Aniracetam, nootropic iray hafa izay telopolo heny noho ny IDRA-21. Ho hitanao fa ny IDRA-21 dia nootropic mandehandeha amin'ny lahateny. Izy io dia iray amin'ireo nootropics tsara indrindra izay manangona totohondry rehefa manatsara ny fitadidianao, ny antony manosika anao, ny fizotranao ary ny fanatsaranao ny vokatra. Vaovao io eny an-tsena, ary mbola mitohy ny fikarohana mba hahalalana bebe kokoa momba izany 22503-72-6 fiantraikany amin'ny fahatsiarovana, ny fahaizan'ny kognita ary ny famerenana ny tsy fahampiana kognita.
Ahoana no fiasan'ny IDRA-21?
Amin'ny maha-ampakine zava-mahadomelina azy, IDRA-21 dia miasa amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-panafody allosteric tsara an'ny mpitsabo AMPA glutamate ao amin'ny ati-doha. Satria ny mpandray AMPA dia miteraka fifindran'ny synaptika haingana, dia misy ny fitomboan'ny tanjaka synaptic manaitaitra. Izy io koa dia fantatra amin'ny hoe activation allosteric.
Dosage / Fampiasana torolalana amin'ny IDRA-21
Na dia notadiavina tamin'ny biby aza ny IDRA-21 dia maro no nampiasa azy io, ary ny hafa mbola eo ihany. Amin'ny maha-nootropika malaza azy, dia olona maro no niresaka momba ny fatra tsara indrindra izay manome vokatra tsara indrindra. Loharano maro no milaza fa ny Dosis IDRA-21 tokony ho hatramin'ny 10mg ao anatin'ny 48 ora. Azonao alaina izany na taloha na aorian'ny sakafo satria rano madio ny rano ary mila rano vera iray fotsiny mandany azy. Raha ny fihaonanao voalohany amin'io nootropic io dia tsara raha manomboka amin'ny dosage IDRA-21 ambany. Azonao atao ny mampitombo izany tsikelikely rehefa azonao antoka fa tsy mihetsika amin'ny vatanao ny vatanao. Fametrahana nootropic IDRA-21 Ankoatry ny fahafahanao mampiasa IDRA-21 irery dia azonao atao ny misafidy ny hampifangaro azy amin'ny nootropics hafa na ny famenony mba hahazoana tombony bebe kokoa amin'ny kognita. Noho ny fientanentanana mety hitranga sy ny tsy fisian'ny fikarohana ampy dia tokony handeha miadana ianao. Tsy hamporisika ny hametahana IDRA-21 amina fanafody ampakine hafa toa Aniracetam. Ny nootropics hafa izay mampitombo ny haavon'ny glutamate dia tokony hialana ihany koa.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny IDRA-21?
Fanatsarana ny antony manosika
Izay olona narisika dia nitombo ny vokatra. Raiso, ohatra, raha manana fiara ianao hanatanteraka ny tsara indrindra ataonao isan'andro, dia mety hahatratra ny tanjonao. Amin'ny lafiny iray, raha tsy manana antony manosika hanao hetsika ianao, dia manimba ny fitomboan'ny fitomboanao. Iray amin'ny Tombony IDRA-21 izany dia mitarika amin'ny fanatsarana ny fanatsarana, izay, manentana ny fahombiazana ary mampitombo ny vokatra. Vokatr'izany dia afaka tratrarinao ny tanjonao sy ny tanjonao, nefa tsy mahatsapa toa azy mafy loatra ianao.
Ampitomboy ny fahamarinan'ny asa
Fantatsika rehetra fa ny valiny tonga lafatra dia mitaky mihoatra noho ny ezaka fotsiny. Ny dikan'izany dia azonao atao ny mametraka ao anatin'ny rehetra anao fa mahatsapa fa tsy mahazo ny marina 100% tianao ho tratrarina. Ny zavatra tsara IDRA-21 vovoka manome antoka anao amin'ny fifantohana sy ny fifantohana ilainao amin'ny fanatanterahana ny vokatra tena tadiavinao. Atambatra amin'ny asa mafy, afaka mahazo toky ianao fa ho tratranao ny haavon'ny avo indrindra.
Nitombo ny fahatsiarovana vetivety
Rehefa mihalehibe ianao dia hitanao fa ny fahatsiarovana ny fotoana fohy nataonao dia tsy mangidy intsony toy ny taloha. Manomboka manadino na dia ny zavatra hita mibaribary aza, ary manohitra izany dia manjary sakaizanao ho fohy ny namanao na ny naoty. Na dia mety hahatsapa ho sahiran-tsaina ianao fa ny fahatsiarovanao ny fotoana fohy dia mety tsy ho lasa mitovy intsony, dia tsy ilaina ny mikorontana. Izany dia satria afaka mampitombo ny fahatsiarovanao vetivety amin'ny fotoana rehetra tianao ianao. Fampiasana 22503-72-6 dia iray amin'ireo fomba mahomby azonao tratrarina hiatrehana ny loza mahatsiravina fohy Tsy mahagaga raha nampiasaina tamin'ny fitsaboana amnesia izy io. Miaraka amin'ny fampiasana azy dia afaka mahatadidy izay ilainao amin'ny fiainanao andavan'andro ianao.
Manana fiantraikany fitsaboana amin'ny fahaketrahana
Malahelo ve ianao, tsy miasa saina foana, na mandalo adin-tsaina? Mihena ve ny fanirianao? Miady mafy ve ianao? Raha eny ny valin-teninao dia mety ho tratry ny fahaketrahana ianao. Araka ny fantatrao angamba dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fiainanao ny famoizam-po, ka tsy hahatratra ny tanjonao feno. Soa ihany, tsy sarotra ny mandresy azy amin'ny fampiasana IDRA-21. Amin'ny fanamafisanao ny atidohanao dia mety manampy anao hiady amin'ny fahaketrahana. Ary koa, misy fitsaboana mahomby izay hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa na oviana na oviana ianao hahatsapa fa toa mihanaka ny tebiteby.
Mitombo ny fifantohana ara-tsaina
Ny fahaizana mitazona am-pitandremana mandritra ny fotoana maharitra tsy misy fanelingelenana dia zava-dehibe indrindra raha te hanana fampisehoana tena tsara ianao. Raha tsapanao fa manjavozavo ny sainao, dia azonao atao ny mampiasa IDRA-21. Avy amin'ny fanamarihana IDRA-21 an-tserasera, misy ny filazana fa manampy anao hijanona amin'ny lahasa ary hanome azy ny saina sahaza azy. Izany dia satria manampy anao hifantoka amin'ny saina na dia amin'ireo fanelingelenana ivelany aza.
Fampitomboana ny fahatsapana ny fahatsapana
Ny fahatsapan'ny saina dia azo raisina ho toy ny fahenina izay tokony hananan'ny olona rehetra. Ny fahaizana mahita zavatra sy mahazo an'izao tontolo izao manodidina anao amin'ny fomba tsara kokoa. IDRA-21 manantona kokoa ny fahatsapan-kevitry ny saina anananao ka mahatonga anao hiharihary.
Manampy amin'ny fitsaboana ny fepetra neurological
Androany, ny fampiasana IDRA-21 dia nampidirina amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana ireo marary mijaly amin'ny toe-javatra neurolojia maro toy ny fizotry ny fahanterana, ny fahasimban'ny kognita, ny aretin'i Alzheimer, ary ny aretina Parkinson.
Mitombo ny fahafantarana
Ny fahaizantsika misaina dia tsy raikitra. Raha betsaka ny olona mihevitra fa ny fototarazo no mamaritra azy ireo, dia misy fomba ahafahanao manana ambaratonga avo lenta. Ny IDRA-21 dia iray amin'ireo fampitomboana ny fahalalàna izay manome fomba hanatsarana ny faharanitan-tsaina.
Vokatry ny lafiny IDRA-21
Betsaka ny olona misitraka an'io zava-mahadomelina io satria tsy misy fiatraikany. Miaraka amin'ny fatra azo atao, dia azo inoana fa tsy hahita fiantraikany amin'ny lafiny rehetra amin'ny IDRA-21 ianao. Na izany aza, ny sasany dia mety hiaina voka-dratsin'ny lafiny ratsy mifandray amin'ny fampiasana ny nootropics na ampakines. toy izany Lafiny ratsy IDRA-21 ahitana;
Ny fitomboan'ny neurotransmission glutamate matetika dia miteraka ireo voka-dratsy IDRA-21 ity. Ny ankamaroany dia mitranga amin'ireo izay manana hetsika fanaon'ny AMPA ary tsy mila mampiasa IDRA-21. Tsy tokony hampihorohoro anao kosa ny fiantraikany ratsy; Nahazo hery be dia be ny zava-mahadomelina, ary ny tombony dia mihoatra ny fiantraikany. Azo inoana fa tsy hijaly amin'ny iray amin'izy ireo mihitsy aza ianao, Raha sendra voan'ny tadidim-pitondrana tato ho ato ianao dia tokony hiala amin'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity satria mety haharatsy ny toe-pahasalamanao.
Fandalinana / fikarohana amin'ny IDRA-21
Tamin'ny lasa dia nisy ny fandinihana natao tamin'ny tanjaka IDRA-21 sy ny fiasa amin'ny AMPA. Ny IDRA-21 dia notsapaina tamin'ny voalavo laboratoara izay tsy maintsy nandalo maze rano. Voamarika fa ny voalavo dia nitantana IDRA-21 natao tsara kokoa raha oharina amin'ireo tsy nanao izany. Noporofoin'izy ireo izany tamin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny maze aloha. Ny vokatry ny IDRA-21 sy ny huperzine amin'ny fahatsiarovana ny fahitana ao amin'ny maora mamaky boky dia nampiasaina hanandrana ihany koa ny fahombiazany.
IDRA-21 vovoka famerenana
Mampitombo ny fifantohana ara-tsaina sy ny fifantohana Edwin R. dia nilaza hoe: "Ity nootropic ity dia mikapoka ireo zavatra hafa rehetra amin'ny fampifantohana ny saina hatrany. Azoko atao ny manamarina an'io satria hatramin'ny nanombohako naka azy dia nahatsikaritra fahasamihafana be tamin'ny fomba fianarako sy ny fiasako aho. Mandalina be aho aorian'ny fiasana, ary taloha, tsy afaka nifantoka tsara aho. Tsy nahomby tamin'ny iray foana aho, saingy tsy izany no zava-misy ankehitriny. Nilaza tamiko ny lehibeko fa lasa niasa mafy aho raha nilaza kosa ny mpampianatra ahy fa mpianatra mifantoka kokoa aho izao. Tiako koa ny zava-misy fa ny fakana IDRA-21 dia tena mety amiko satria raisiko mandritra ny andro amin'ny rano iray vera. Ny IDRA-21 no tena notadiaviko. ” Nanampy ahy ny fahaketrahana malefaka Hoy i Essy J., "Vao haingana aho dia niharan'ny fahaketrahana malefaka noho ny asako, ny zaza vao teraka ary ny fiainana amin'ny ankapobeny. Nanandrana zava-mahadomelina maromaro aho, saingy tsy nisy toa nanatsara ahy. Soa ihany, ny namana iray dia nanoro hevitra fa tokony Mividiana entana IDRA-21 hanandrana sy hiady amin'ny famoizam-po sy ny fanahiana. Eny, telo fotsiny io no niditra tamin'ity fanafody ity ary niteraka ny vokany tsara indrindra. Afaka mieritreritra mahitsy tontolo andro aho izao nefa tsy miovaova ny toetr'andro. Midera izany aho amin'izay olona mahatsapa fa efa maty. " Nanampy ny zanako vavy hiatrika fanadinoana izany William S. dia nilaza fa: "Ny zanako vavy dia manana ADHD mafy ary ny mifantoka na dia mandritra ny dimy segondra aza dia asa lehibe tokoa. Ny vovony IDRA-21 kosa dia mpamonjy aina hatramin'ny farany nihatsara ny fifantohany. Mahatsiaro zavatra betsaka kokoa noho ny taloha ihany koa izy, noho io vokatra io. Tsikaritro ihany koa fa tsy misy fiatraikany aminy, ary izany dia vao mainka manome marika azy. Misaotra anao IDRA-21, afaka miaina fiainana ara-dalàna izao ny zanako. ”
Aiza no hividianana vovoka IDRA-21?
Araka ny hita ao amin'ny lahatsoratra, IDRA-21 dia afaka manome ny fiainanao fihodinana tanteraka. Ankoatra ny fanaovana anao mahomby kokoa sy mailo kokoa, IDRA-21 dia mety hahatonga anao hanana fiainana sambatra. Fantatro fa afaka manontany tena ianao hoe aiza no ahafahanao mamorona azy. Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra atrehan'ny olona ny fahazoana loharano azo antoka IDRA-21. Izany dia satria io vokatra io dia nivadika ho vatosoa tsy fahita firy raha jerena fa mbola eo am-panadihadiana klinika izy io. Tsy midika anefa izany fa tsy hametra-tànana amin'ny kalitao IDRA-21 mihitsy ianao. Afaka foana ianao mividy IDRA-21 -tserasera ary efa naterina tany amin'ny toerana misy anao izany. Tsy mahavaky anao ny aretin-doha an-dàlana miala amin'ny fivarotana mankany amin'ny fivarotana mangataka azy io ve izany? Mametraha lamina miaraka aminay anio ary atombohy ny dianao ho amin'ny antony manosika bebe kokoa sy hanatsarana ny fanatontosana.
Ny famokarana zava-mahadomelina azo fantarina, namboarin'i Jerry J. Buccafusco, pejy 92-93
Ampakines: Ampakine, Cx717, Idra-21, Ly-503,430, Aniracetam, Pepa, Farampator, Cx-516, Unifiram, Sunifiram, LLC Boky, General Books LLC, 2010, pejy 1-36
Fahasalamana sy zava-mahadomelina: aretina, prescription & fanafody, nataon'i Nicolae Sfetcu
1.Inona ny vovony IDRA-21?
2. Ahoana no fiasan'ny IDRA-21?
3. Dosage atolotra / fampiasana torolàlana momba ny IDRA-21
4.Inona ireo tombony azo avy amin'ny IDRA-21?
5.Vokatry ny IDRA-21
6.Studies / fikarohana momba ny IDRA-21
7.IDRA-21 famerenana vovoka
8.Aiza no hividianana vovoka IDRA-21?